सामाजिक जटिलता र जीवनका कठिनाइ | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सामाजिक जटिलता र जीवनका कठिनाइ
सामाजिक जटिलता र जीवनका कठिनाइ
भनिन्छ, मानिसको जीवनको सर्वाधिक रमाइलो समय हो बाल्यकाल । यद्यपि, सबैका लागि त्यस्तो अवसर नजुट्न सक्छ । बाल्यकालमै असिम पीडामा डुबेकाहरु हाम्रै समाजमा कति धेरै भेटिन्छन् । संसार चिन्दै जाँदा जीवनको मूल्य महसुस हुँदै जान्छ । आफ्नो, आफन्तको सहयोग र असहयोगको साक्षी बनिँदै जान्छ । पाइला पाइलामा सफलता, असफलताका शृंखला गुँथिदै जान्छन् । जीवन अघि बढिरहन्छ, समय चक्र चलिरहन्छ ।
कोही जीवनमा आमाबुबाको मूल्य र महत्व बुझ्न नपाउँदै बिछोडिन्छन् । कोही संसार चिन्न नपाउँदै आमाबुवालाई गुमाउँछन् । आमाबुवाबाट पाउनुपर्ने मायाबाट वञ्चित हुनेहरुले संसारबाटै एक्लिएको महसुस गर्लान् । बेसहारा जीवन बिताउनुपर्दाको पीडा तिनका जीवनमा खात लागेर बसेको होला ।
बालक भनेका काँचो माटो हुन्, जस्तो बनायो, त्यस्तै बन्छन् । अति संवेदनशील हुन्छ, यो अवस्था । अधिक माया र सम्पन्नताले बालबालिका बिग्रिएका थुप्रै उदाहरण हाम्रै सामु छन् । कोही भने एक छाक खानलाई दिनरात गिटी कुटेर आधा पेट खान बाध्य हुन्छन् ।
जब मानिस किशोरावस्थामा प्रवेश गर्छ । जीवनको गति अर्कै हुन्छ । माया, प्रेम, धोका, विछोड, हत्या र आत्महत्याका अनेकन् गतिविधि देख्दै र सुन्दै उज्जवल भविष्यको रेखा कोर्ने बेला यही हुन्छ । तर, समाजका यावत् जटिलताबाट जेलिँदै अघि बढ्नुपर्दा अधिकांश किशोरकिशोरी कुहिराको काग बनिरहेका हुन्छन् ।
कति जटिल बन्दै छ, समाज अनि पारिवारिक सम्वन्ध ? जहाँ एउटा सद्भाव, सहयोग, साथ, आदर, सत्कार अनि हेरचाह छैन । जब कुनै महिला एकल हुन्छे, यो समाजको हेराइले अनि व्यवहारले पलपल मारिरहन्छे । खोई, कहाँ छ र शान्ति यो समाजमा ? उल्टै समाजकै कारण मान्छे उदासीनता, चिन्ता र मानसिक रोगको सिकार बन्छ । तर, समाजको यही जटिलतासँग जुध्दै संर्घषरत रहनु जो कसैको बाध्यता हुन जान्छ ।
हामीले देखेका छौं र कतिपयले भोगेका पनि छौं । कोही युद्धमा मरेर गए, कोही एक्लो भए । कति भूकम्पमा पुरिएर मरे, कति अपांग भए, हातखुट्टा भाँचिएर बेवारिसे भए । तर, जीवनबाट हार मानेका छैनन् । बाँचिरहेका छन् । समस्यासँग लडिरहेका छन् । ‘भोलि त केही होला !’ भन्ने आशामा छन् ।
समस्या र परिस्थिति बुझ्न नसक्ने मानिस विभिन्न मानसिक पीडाबाट झन् विकराल स्थितिको सामना गर्न बाध्य हुन्छ । समस्यासँग जुध्न सक्ने र आफूलाई चिन्न सक्ने मान्छे कहीँकतै सुखी पनि हुनसक्छ । जीवनसँग रमाउन सक्ने, सकारात्मक सोच राखेर असहज वातावरणलाई सहज बनाउने कोसिस गर्ने र अरुको देखासिखी नगर्ने व्यक्ति कम्तीमा मानसिक रुपमा स्वस्थ हुन्छ र जीवनमा सन्तुष्ट पनि हुन्छ । जो सफल हुन्छ, उसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ । जो सफल हुन सक्दैन, ऊ चुपचाप पृथ्वीको गर्भमा बिलाउँछ ।
हाम्रो समाज र बालबालिकाको अवस्था
प्रविधिको प्रयोगमा नेपाली समाज निकै अगाडि बढेको छ । विश्वमा विकसित कुनै पनि प्रविधि तत्काल हामीसम्म आइपुग्छन् । मोबाइलको बढ्दो विकास र प्रयोगले फेसबुक, म्यासेन्जर, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल सहज र सस्तो भएका छन् । तर, यसको गलत प्रयोगले मानिस दिनप्रतिदिन मानसिक समस्यामा फसिरहेका छन् । मानिसमा उदासीनता, चिन्ता, रिस, आक्रामक व्यवहार, एक्लोपन आदि बढेको छ ।
दिनभर अफिसको काममा व्यस्त हुनेहरु पनि घर पुगेपछि मोबाइल र ल्यापटपमा मात्रै भुल्दा पारिवारिक अवस्था झन् विकराल बन्दै छ । सधैं सँगै भएर पनि एकअर्काको मनोदशा बुझ्न परिवारका सदस्य असमर्थ बन्दै गएका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो समस्यामा बालबालिका परेका छन् । उनीहरुमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव परिरहेको भन्नेतर्फ कसैले हेक्का राखेको पाइँदैन । यस्ता कार्यले बच्चाको सर्वाङ्गीण विकासमा असर पर्छ भन्ने कुरामा हरेक साक्षर मानिस सचेत हुनु आवश्यक छ ।
बाललबालिकाको भविष्य उज्वल पार्नु छ भने अभिभावकले बच्चालाई समय दिनुपर्छ्र । बच्चाका कुरा सुन्नुपर्छ । उनीहरुलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ । साथीको व्यवहार गर्नुपर्छ । एकछिन भए पनि सँगै खेल्नुपर्छ । प्रेरणा र प्रोत्साहन हुने काम गर्नुपर्छ । हौसलाले नै बालबालिकालाई मार्गदर्शनको काम गर्छ । यसबाट भोलिको दिनमा हामीले सोचेभन्दा बढी खुसी मिल्नेछ ।
बालबालिकालाई यो महसुस होस् कि मेरो कोही छ, मेरा कुरा सुन्ने, मलाई माया गर्ने, मलार्ई सहयोग र साथ दिने । त्यसपछि बच्चाले हरेक कुरा ढुक्कसँग भन्न सक्छ । जसले गर्दा उसमा विश्वास सकारात्मक सोच, सिर्जनशीलता, बौद्धिकताको विकास हुन्छ, जो हरेक आमाबुवा चाहन्छन् । र, यही नै असल संस्कारको द्योतक पनि हो ।
हरेक घटनाको सामना गर्नुपर्छ । लडेर जित्नुको मज्जा नै छुट्टै छ । हार मान्न हुँदैन । संसारमा धेरै मानिस सामना गरिरहेका हुन्छन् । यो जीवन फेरि पाइँदैन । मरेपछि कसलाई के थाहा फेरि यस्तै जीवन पाइन्छ भन्ने ? खुट्टामा बिझेको काँडा निकाल्ने कोसिस गर्नुभन्दा खुट्टा नै काट्नेतिर लाग्नु भनेको मुख्र्याइँ हो । त्यसैले अरुलाई हानी हुने काम नगरौं, आफूलाई माया गरौं ।
पछिल्लाे - लघुवित्तको किस्ता बुझाउन नसक्दा घरमा ताला
अघिल्लाे - ताइवानको युयानपेइ युनिभर्सिटीबाट सुस्वास्थ्य हस्पिटलमा इन्टर्नसिप